नेपालमा आज कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन सर्वाधिक सङ्ख्यामा मृत्यु पुष्टि जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
नेपालमा आज कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन सर्वाधिक सङ्ख्यामा मृत्यु पुष्टि
काठमाडौं । बिहीवार नेपालमा कोरोनाभाइरसका कारण पाँच जनाको मृत्यू भएको जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिहीवार अपराह्ण दिएको छ। एकै दिन पुष्टि भएको यो सर्वाधिक सङ्ख्यामा मृत्यु हो। यससँगै अहिलेसम्म कोभिडका कारण मृत्यु हुने सङ्क्रमितको आधिकारिक सङ्ख्या ६५ पुगेको छ।
नेपालका विभिन्न स्थानमा थप ३६० जनामा कोभिड-१९ पुष्टि भएको छ। यो वृद्धिसँगै अहिलेसम्म देशभरि सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या २१,७५० पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले काठमाण्डूमा आयोजित दैनिक प्रेस ब्रीफिङमा बताए। मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार अहिले सक्रिय सङ्क्रमण भएका व्यक्तिको सङ्ख्या ६,२९६ छ।
काठमाण्डू उपत्यकामा कति थपिए?
सङ्क्रमण सङ्ख्या ह्वात्तै वृद्धि भइरहेको काठमाण्डू उपत्यकामा बिहीवार थप ८७ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। तीनमध्ये ७६ जना काठमाण्डू जिल्लाका, १० जना ललितपुर जिल्लाका र एक जना भक्तपुर जिल्लाका रहेका छन्। पाँच सयभन्दा माथिको सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू उपचाररत रहेका जिल्लाहरूमा काठमाण्डू थपिएको छ। अन्य जिल्लाहरू पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र कैलाली रहेका छन्।
सङ्क्रमित शून्य भएका जिल्लाहरूमा खोटाङ, धनकुटा, संखुवासभा, मनाङ, मुस्ताङ र रुकुम पश्चिम रहेका छन्। पर्साका ४२ जनामा बिहीवार सङ्क्रमण पुष्टि भयो भने कपिलवस्तुका ३२ जनामा, धनुषाका २४ जनामा र कैलालीका २१ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। बिहीवार पुष्टि भएका पाँच मृतकहरू यस प्रकार छन्:
विगत २४ घण्टामा पीसीआर विधिबाट ६,६२२ वटा परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सो अवधिमा २३३जना निको भएका छन् भने भाइरसमुक्त भएका सङ्क्रमितको सङ्ख्या १५,००० नाघेको छ। अहिलेसम्म गरिएको पीसीआर परीक्षणको सङ्ख्या चार लाख नाघेको छ। अहिले देशभरि विभिन्न स्थानमा ९,४७० मानिसहरू क्वारन्टीनमा छन्। बीबीसी